नारायण अमृत | २०७५ चैत ४ सोमबार | Monday, March 18, 2019 १०:४२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो पटक छलफल भएको समाचार सतहमा आएपछि एकजना कहलिएका व्यापारीले प्रधानमन्त्री ओलीका एक सल्लाहकारलाई फोनै गरेर सोधे, ‘अरु कुरा चाहिएन, अर्थमन्त्री चेन्ज हुन्छन् कि हुन्नन् सर?’
प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अल्मलिए। के भन्ने के नभन्ने, उनी विलखबन्दमा परे।
सल्लाहकारले जवाफ दिए, ‘अर्थमन्त्री त यसै भन्न सकिन्न। दुई पार्टी अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको छ। मलाई थाहा भएको यत्ति हो।’
निजी क्षेत्रका व्यापारिक केही समूहहरु अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। कसिलो आर्थिक नीति, कडिकडाउ आर्थिक व्यवहार र सेयर बजारको छलाङ खुम्चिएको भन्दै व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री खतिवडासँग रुष्ट छन्। यद्यपि कुनै पनि प्रसिद्ध घरनाका व्यापारीले अर्थमन्त्रीका बारेमा खुलेर टिप्पणी गरेका छैनन्।
यतिसम्म कि कतिपय व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रीबारे गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अर्का अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारसम्म नपुगेका भने होइनन्। तर, अर्थमन्त्रीबारे ओली र दाहालबीच फरक–फरक मत रहेको कुरामा स्रोतहरुको दाबी छ।
‘प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री खतिवडासँग खुसी नै हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओली सन्निकट एक नेता भन्छन्, ‘व्यापारीहरुका चाहना के हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ। उनीहरुको स्वार्थभन्दा देशलाई दिर्घकालीन असर गर्ने आर्थिक नीति महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा ओलीले बुझ्नु भएको छ।’
तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने अर्थमन्त्रीबारे अलग धारणा राख्छन्। दाहालकाे चाहनाबारे उनी निकट एक नेताले केहीदिन अघि भनेका थिए, 'अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा चितवनबाट जनमत प्राप्त सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीको कुर्चीमा राख्न सकियोस्।'
अर्थमन्त्रीका रुपमा अनुभवप्राप्त पाण्डे नेकपाभित्र माधव नेपाल समूहका नेता हुन्।
पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा एकातिर उद्यम क्षेत्रका अगुवाहरुको माग सुने जस्तो हुने र अर्कोतिर चितवनको राजनीति आफ्नो पकडमा आउने आंकलन अध्यक्ष दाहालको छ। ‘त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्रको समूहगत समिकरणमा पनि शालिन र कम विवादित छबीका सुरेन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा राख्दा दाहाललाई फाइदै हुन्छ’ दाहाल निकट एक नेता भन्छन्, ‘दाहालले पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन खोज्नुको कारण यही हो।’
अर्थ मन्त्रालय त भइहाल्यो। चासोको केन्द्रमा छ अर्को मन्त्रालय पनि। हेलिकाेप्टर दुर्घटनामा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि खाली रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिइएला?
खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हाँकिरहेका गोकुल बाँस्कोटालाई खाली रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा लैजान चाहन्छन्। तर, अर्का अध्यक्ष दाहाल भने युवा नेता योगेश भट्टराईलाई सो मन्त्रालय दिँदा राम्रो हुने धारणा राख्छन्। यद्यपि कतिपय सञ्चार माध्यमहरुमा योगशलाई मन्त्री पद दिन ओली राजी नभएको समाचारहरु पनि आइसकेका छन्।
‘योगेशजीका विषयमा जे-जस्ता समाचारहरु आएका छन्, त्यसमा सत्यता छैन’, प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले नेपाल लाइभसँग भने, ‘उहाँ मन्त्री हुने सम्भावना समाप्तै भएको भन्ने होइन। खासमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न हतार नगर्ने, तर गर्दा परिपक्व हिसाबले निर्णय गर्ने भन्नु भएको छ।’
नेकपाका दुई शीर्षस्थ नेताबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा छलफलसँगै मन्त्री बन्न आकांक्षीहरुको ‘लबिङ’ सघन बन्दै गएको छ। त्यसो भए, मन्त्री बन्ने चर्चा भएकाहरुको लाममा सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई बाहेक अरु छैनन् त?
‘लबिङ’ कै आधारमा भन्ने हो, मन्त्री पद ताकेका अरु नामहरुको चर्चा पनि भइरहेको छ। बालुवाटार सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेता महेश बस्नेतलाई पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा समावेस गर्न चाहन्छन्। भक्तपुरबाट जनमत प्राप्त नेता बस्नेतलाई यसअघि पनि उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
चाँजोपाँजो मिलेमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक उनलाई सोही मन्त्रालय वा यातायत व्यवस्था मन्त्रालय हाँक्न पठाउने छन्। यातायात व्यवस्था मन्त्रालय चलाइरहेका मन्त्री रघुवीर महासेठले अपेक्षाकृत परिणाम निकाल्न नसकेको विश्लेषण बालुवाटारको छ।
रघुबीर महासेठसँग मात्र होइन अधिक मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन्। ७ जना मन्त्रीहरुलाई त प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रेड जोन’मा राखेको खबर यसअघि नै नेपाल लाइभले प्रकाशित गरिसकेको छ।
कहिले होला मन्त्रिमण्डल हेरफेर? ‘रेड जोन’मा परेका मन्त्रीको सूची प्रम ओलीको हातमा
अत्यन्तै न्यून परिणाम दिएका कतिपय मन्त्रीलाई बिदाइ गरिने र खाली भएका मन्त्रालयमा पूर्व माओवादीबाट बढीमा ३ जना नयाँ अनुहार समावेस गर्ने योजना अध्यक्षद्वयको छ। पूर्व माओवादीबाट नेत्री पम्फा भुसाल, अग्नि सापकोटा र जनार्दन शर्माले मन्त्रीका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्रकै समीकरण प्रभावित तुल्याउन सक्ने अवस्थामा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन्। यसका लागि उनले दुबै अध्यक्षसँग कुरा राखिसकेको बताइएको छ।
पुष्पकमल दाहाल पत्नी सिता दाहालको उपचारार्थ अमेरिका उड्नु अघिका छलफलहरुमा दुबै अध्यक्षले कतिपय मन्त्रिहरुका कार्यप्रगति विवरणबारे मात्र होइन नयाँ मन्त्रीमण्डलमा समावेस गर्न सकिने नयाँ अनुहारका विषयमा पनि छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ।
दाहाल अमेरिका उडेकै दिन आइतबार विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘अहिल्यै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुने’ बताएका छन्। यद्यपि यसबारे दुई अध्यक्षबीच पर्याप्त कुराकानी भइसकेको छ।
‘छलफल जारी नै छ, उहाँहरुबीच कसले के जिम्मेवारी दिने भन्ने अन्तिम निष्कर्ष निस्किनसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डलबारे यस्तो कुरा गर्नुभएको हो’, ओली निकट एक नेताले भने, ‘मध्य चैत्रमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ, त्यसपछि बल्ल दुई अध्यक्षबीच भएका कुराकानीको परिणाम बाहिर आउँनेछ।’